Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNejc
I-Brlog yindawo yokuhlala kwindlu enkulu yosapho. Yahlaziywa ngokupheleleyo kwaye yahlaziywa ukusuka phezulu ukuya ezantsi ngo-2018 kunye no-2019. Indawo yokuhlala ilinganisa i-103 m2 kwaye ifanelekile kubantu abayi-2-8 kwaye iyimfihlo ngokupheleleyo, kwiqela le-1 labantu kuphela. Iyabalungele abantwana, akukho ndlela ziphambili.
Inamagumbi okulala ama-2 - ngalinye linebhedi enkulu yenkosi yabantu aba-2 - kunye negumbi lokuhlala elinesofa yabantu aba-2 kunye nenye ibhedi enkulu yokumkani. Igumbi lokuhlala lineTV entsha ye-65-intshi ye-Ambilight flat-screen. Igumbi lokuhlala linokufikelela kwi-balcony. Kukho igumbi lokuhlambela elineshawa enkulu, indlu yangasese kunye nomatshini wokuhlamba, kunye negumbi langasese elahlukileyo. Ikhitshi libanzi kakhulu kwaye linazo zonke izixhobo ezibalulekileyo kunye nezixhobo ozifunayo kwisidlo esilungileyo esiphekwe ekhaya. Iza nefriji enkulu kunye ne-dishwasher. Ixhotyiswe ngeembiza kunye neepani zabo bonke ubungakanani, iipleyiti kunye nezixhobo zonke zasekhitshini oya kuze uzifune kwiholide yakho. Ikhitshi nayo inokufikelela kwibalcony. Ilinen yebhedi ecocekileyo kunye neetawuli ezicocekileyo zinikezelwa. Ine-wifi yasimahla kunye neendawo zokupaka ezi-4.
I-Brlog ifanelekile kwiintsapho, amaqela amakhulu abahlobo kunye nezibini ezifuna iholide ezolileyo. Yindawo entle yabahambi ngeenyawo nabakhweli beebhayisikile, ngenxa yokuba kufutshane neenduli (iPokljuka inamathuba okuya eTriglav, Viševnik, Debela peč, Planina Lipanca, Planina Javornik, Planina Zajamniki… kunye nethafa leMežakla lingaphandle kwendlu), kwaye iindlela zebhayisekile, njengeRadovna phantsi komlambo. I-Pokljuka gorge ikumgama wokuhamba. Amathuba angenasiphelo kwaye ngenxa yokuba singabakhweli abanomdla kunye nabakhweli beebhayisikile, siyavuya kakhulu ukunceda ngolwazi malunga neentaba, iinduli kunye neendlela zebhayisekile.
Ngenxa yomthetho waseSlovenia, ixabiso alibandakanyi irhafu yabakhenkethi. Irhafu yabakhenkethi ihlawulwa xa ufika (i-2.5 € ngosuku kubantu abadala, i-1.25 € ngobusuku kubantwana abaneminyaka eyi-7-18, simahla kubantwana 0-7).
65" HDTV ene-I-Netflix, intambo yepremiyamu, izitishi zeTV eziqhelekileyo
I-Brlog ikwipaki yesizwe yaseTriglav, ekukuphela kwayo kwepaki yesizwe yaseSlovenia esembindini weJulian Alps. Indlu ijikelezwe ngamahlathi, iinduli kwaye ikwindawo ezolileyo kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Nejc
Sithetha isiSlovenian, isiNgesi, isiCroatia, isiSerbia, ein bisschen Deutsch et un peu français (mais pas tres bien). Siyafumaneka kwimibuzo kwifowuni yethu 24/7. Sihlala imizuzu engama-45 kude nefulethi.